आज के होला संसदमा ? महाअभियोगमा पछि हट्दै प्रचण्ड र देउवा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
आज के होला संसदमा ? महाअभियोगमा पछि हट्दै प्रचण्ड र देउवा
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधशि सुशील कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका विषयले राजनीतिमा हलचल मच्एिको छ । सरकार र संसद दुईटै अब के गर्ने अन्यौलमा छन् । चारवटा विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । आज सबैको चासो संसदतिर देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब संसद्ले के गर्ला ? प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमै छलफल गर्न आइतबार दिउँसो १ बजे संसद् बैठक बोलाइएको छ ।
आन्तरिक परामर्शमा रहेकी सभामुख ओनसरी घर्तीले आइतबारको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्ने सम्भावना बढेको उनीनिकट स्रोतहरूको भनाइ छ । ‘सभामुख ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसक्नुभएको छैन, विभिन्न विकल्पमा उहाँलाई सुझाब आइरहेको छ, उहाँ अझै आन्तरिक छलफलमै हुनुहुन्छ । ३१ वैशाखको पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावको मिति नजिक छ ।
त्यसैले सभामुखले अब ३१ वैशाखअगाडि संसद् बैठक नराख्नेतिर सोचिरहनु भएको देखिन्छ,’ सभामुखनिकट स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार आजको संसद बैठक स्थगित गरेर अर्को दिन सार्ने र त्यो बिचमा सरकारले महाअभियाग प्रस्ताव फिर्ता लिनेगरि छलफल अगाडी बढेको छ ।